जीवनको पानी – Word of Truth, Nepal
येशू भोकाउनुभएको छ भनी चेलाहरू जान्दथे र तिनीहरूले उहाँलाई खाना खान आग्रह गरे। येशूले यसै अवसरमा आफ्ना चेलाहरूलाई केही शिक्षा दिन थाल्नुभयो। तिनीहरूको दिमागमा एउटै कुरो थियो–खानेकुरा। तिनीहरू भोकाएका थिए, तिनीहरू खान चाहन्थे। खानेकुराभन्दा एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ भनी येशू तिनीहरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। खाना महत्त्वपूर्ण छ र मानिस खानेकुराबिना बाँच्न सक्दैन तर खानेकुराभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा त्यहाँ छ। येशूले तिनीहरूलाई यूहन्ना ४:३२ मा के भन्नुभयो हेर्नुहोस्। यस कुराले चेलाहरूलाई ताजुब पार्‍यो। येशूले सामरी स्त्रीलाई पनि ताजुब पार्नुभएको थियो। अब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पनि ताजुब पार्नुभयो। येशूसित कसरी खाना हुनसक्थ्यो र? कसैले उहाँका निम्ति ________________ केही ल्याइदिएको थियो कि? (यूहन्ना ४:३३ हेर्नुहोस्)।
गवाही १–बप्‍तिस्मा दिने यूहन्ना (यूहन्ना ५:३१-३५)
गवाही २–येशूले गर्नुभएका कामहरू (यूहन्ना ५:३६)
पानीलाई दाखरसमा परिवर्तन गर्ने कार्य, राजकर्मचारीको छोराको छक्कलाग्दो चङ्गाइ, अशक्त मानिसको चङ्गाइ–यी सब आश्चर्यकर्महरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र नै हुनुहुन्छ भनी देखाउँदछन्।
गवाही ३–पिता (यूहन्ना ५:३७-३८)
गवाही ४–पवित्र शास्त्रहरू (यूहन्ना ५:३९-४४)
गवाही ५–मोशा (यूहन्ना ५:४५-४७)
यसैकारण तिनीहरू ज-जसले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गछर्न् तिनीहरू …
…बप्‍तिस्मा दिने यूहन्ना र उनको सेवाकार्यलाई इन्कार गर्दै छन्
…येशूका आश्चर्यकर्महरूको बेवास्ता गर्दै छन्
…परमेश्वर पिताको गवाही र उहाँको वचनलाई इन्कार गर्दै छन्
…पुरानो नियम पवित्र शास्त्रहरूलाई अविश्वास गर्दै छन्
…मोशाका लेखोटलाई अविश्वास गर्दै छन्
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 13:00:272020-11-27 13:14:21जीवनको पानी
क्रूसमा उचालिएका मुक्तिदात�...जीवनको रोटी